Xaaladda Magaalada Garbahaarey oo Saakay dagan – Banaadir Times
Xaaladda Magaalada Garbahaarey oo Saakay dagan
By banaadir 25th August 2018 174 No comment
Dibad baxyo Rabshada wata oo lagaga soo horjeedo Maamulka Axmad madoobe ayaa shalay waxa ay ruxeen Magaalada Garbahaareey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Dibad baxyada oo ay dhigayeen bulshada ku nool deegaanka ayaa waxa uu ahaa mid cabasho ah kaasi oo ay ku diidayan in madoobe uu jubbaland sii joogo.
Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Jubbaland, Aadan Ibraahim Aw Xirsi oo Garbahaarey shalay gaaray ayaa waxaa dhagxaan la dhacay shacab careysan waxaana uu dhaawac ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday .
Wasiirka wuxuu sheegay in caruur dhagxan wata ay isaga tuuryeeyeen sidaasna uu dhaawac ku soo gaaray.
Aw Xirsi ayaa ku tilmaamay kacdoonka Garbahaarey ee looga soo jorjeeda Jubbaland uu yahay mid lasoo abaabulay, isagoo ka gaabsaday inuu carabka ku dhuftay cidda gadaal ka riixaysa dibaxbaxyada.
Jubbaland ayaa dhawaan kasoo celisay Garoonka Kismaayo diyaarad siday Taliye-yaal ciidan, oo uu ku jiro Taliyaha cusub ee dhawaan dowladda Federaalka u magacawday qeybta 43aad ee ciidanka xoogga.
Axmad madoobe oo u muuqda mid gabalkiisa uu sii dhacaayo ayaa waxaa hadda heysata laba darran mid dooro waa in uu kursuga baneeyaa ama in uu la kulmaa mucaaradad xooggan oo shacab iyo siyaasiyiinba ay qeyb ka yihiin.
Dadka falanqeeya siyaasaddda Jubbaland ayaa waxa ay sheegayan in haddii ay sidaan wax ku sii socdaan ay soo dadajin doonto in axmad madoobe uu si sharuud la’aan ah kursiga ku baneeyo jubbaland ay ka tashato aayaheeda iyo horumarkeeda .
Mas’uuliyiin ka digay Muddo kororsi uu sameeyo Axmad Madoobe
Sawirro: Duqa Caasimadda Muqdisho oo Dubai kula kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraat-ka
By banaadir 11th September 2018
Dil ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Galgaduud & xiisad ka dhalatay
By banaadir 15th May 2021
Aqroso.Xildhibaanada Gobolada Waqooyi oo soo saaray qoraal liddi ku ah Cabdi Xaashi.
By banaadir 3rd December 2020